မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ ဈေးများတွင် ခွင့်မပြု ဓာတုဆိုးဆေး ကင်းစင်သော ဈေးဆိုင်မျာ?? - Yangon Media Group
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဈေးများတွင် ခွင့်မပြုဓာတုဆိုးဆေးကင်းစင် သောဈေးဆိုင်များ ဖြစ်လာစေရန် ရှောင်တခင် စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန(မန္တလေးရုံးခွဲ) မှ သိရသည်။
”၂ဝ၁၆ ကစပြီး မန္တလေး ဈေးချိုတော် အပါအဝင် မန္တလေးမှာရှိတဲ့ဈေးတွေအားလုံးက ခွင့်မပြုဓာတုဆိုးဆေး ကင်းစင်အောင် စနစ်တကျအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ ဈေးချိုတော်က စည်းကမ်းလိုက်နာတဲ့ ခွင့်မပြုဓာတုဆိုးဆေးကင်းစင်တဲ့ဆိုင်တွေကို အသိအမှတ်ပြုကတ်တွေ ပေးထားပါတယ်။ ဒီနှစ်ထဲ မှာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ ဈေးတွေမှာ ခွင့်မပြုဓာတုဆိုးဆေးကင်းစင် သောဈေးဆိုင်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ လုပ်ဆောင် နေပါတယ်။ ညောင်ဦး၊ မီတ္ထီလာ စတဲ့ ခရိုင် မြို့နယ်တွေမှာ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ခရိုင်ရုံးခွဲတွေ က ရှောင်တခင် စစ်ဆေးတာတွေ လုပ်ဆောင် နေပါတယ်”ဟု အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန မန္တလေးရုံးခွဲ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာကျော်ကျော်က ပြောသည်။
မန္တလေးမြို့ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ် ၂၆ လမ်းနှင့် ၈၄ လမ်းထောင့်ရှိ မန္တလေးဈေးချို တော်၌ ခွင့်မပြုဓာတုဆိုးဆေး ကင်းစင်သော ဈေးဆိုင် ၁၂၄ ဆိုင်အား ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်က အသိအမှတ်ပြုကတ်ပြားများ ပေးအပ်ခဲ့သည်။ အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် ၂ဝ၁၆ မတ်လမှစတင်၍ မန္တလေးဈေးချိုတော်ကို အဓိက ထား၍ ခွင့်မပြုဓာတုဆိုးဆေးများ ကင်းစင် ရေးကို စီမံချက်တစ်ရပ် ရေးဆွဲပြီး အကောင် အထည်ဖော်ခဲ့ပြီး ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် နှစ်လယ်ပိုင်း ပြန်လည်စစ်ဆေးချက်ရလဒ်များအရ ရာနှုန်း ပြည့်နီးပါး ကင်းစင်ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိ ခဲ့ရာ ယခုကဲ့သို့ ခွင့်မပြုဓာတုဆိုးဆေး ကင်း စင်သောဈေးဆိုင်များအား အသိအမှတ်ပြု ကတ်ပြား ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
ပြည်သူလူထု၏ နေ့စဉ်စားသုံးနေသော အစားအသောက်များ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ အရည်အသွေး ပြည့်ဝမှုရှိစေရေး၊ ဆိုးဆေးကင်းစင်သောစံပြဈေးများ ဖြစ်ပေါ် လာစေရေး၊ အစားအသောက်များတွင် ဆိုး ဆေးများ ကင်းစင်လာသည်နှင့်အမျှ ပြည်သူများ၏ လူ့သက်တမ်း ပိုမိုတိုးတက်လာချိန်တွင် ဈေးသည်များ၏ စီးပွားရေးလည်း ပိုမိုကောင်း မွန်လာရေး စသည့်ရည်မှန်းချက်များဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ကြောင်း သိရသည်။
တရားဝင်ကြေညာခြင်း မရှိသေးသည့် အဆင့်မြင့်ပညာရေး ဥပဒေမူကြမ်းတွင် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုနှင့် ပွင?
ထရန့် ဇနီး၏ ပြစ်တင်ဝေဖန်ခံရပြီးနောက် အကြံပေးတစ်ဦး နုတ်ထွက်